Umaki: ukukhushulwa kwebhulogi | Martech Zone
Umaka: ukukhushulwa kwebhulogi
Isu lokuphumelela lokubhuloga alilula kepha futhi akuyona isayensi ye-rocket. Abanye abantu bacabanga ukuthi “Uma ubhuloga, bazoza…” kepha akukho okungaba kude neqiniso. Impela, ungaheha abantu ku-blog yakho ngokuhamba kwesikhathi futhi ungahle weneliseke ngalokho. Kepha uma ungatholi uhlobo lwezinombolo udinga ukugcina isu elihle lokubloga bese uthola imbuyiselo ngesikhathi osichitha,
Sibhale i-athikili enemininingwane yokuthi ungakusebenzisa kanjani okuthunyelwe okulandelayo kwebhulogi. Le infographic evela ku-DivvyHQ, uhlelo lwekhalenda lokuhlela olungenasipredishithi, ihamba ngezinyathelo ezithile ukukhuthaza okuqukethwe kwakho ngemuva kokushicilelwa. Ukuphela kwento enginqikaza ukubuza abanye ama-blogger ukuthi bathuthukise okuqukethwe kwakho. Uma ubhala okuqukethwe okuhle, amanye ama-blogger azokwabelana ngakho… Ngizizwa sengathi kuluhlaza ukubuza nje. Ngingashintsha le nto ngikhokhele
Sihlala sitshela amaklayenti ethu ukuthi akwanele ukubhala nje okuthunyelwe kwebhulogi. Uma okuthunyelwe kwakho sekubhaliwe, udinga ukwazisa izethameli ezihlosiwe ukuthi zikhona… lokhu kungafezwa ngokushicilela isingeniso ku-Twitter, ku-Facebook, ukusithumela kumasayithi angeziwe, ukuthumela isaziso sabamukeli bakho be-imeyili, nokukuhambisa kubhukimakhi yomphakathi amasayithi yonke indawo. Abantu abaningi ababuyeli kusayithi usuku nosuku futhi bambalwa abazobhalisela